LIISKA HMS Bounty FSX & P3D & FS2004 - Rikoooo
HMS Borant Reflica FSX & P3D
downloads 18 840
Updated on 11 / 01 / 2019 : Nooca cusub 2.0 hooyo FSX lana jaan qaada Prepar3D v4. XUSUUS: FSUIPC Looma Baahna HMS Fadliga inuu shaqeeyo. 64-bit code ayaa lagu daray P3DAdeegsadayaasha V4 +
HMS Bounty 18th Century Xilliga Dhirta Tallaalka Tallaabooyinka Tallaabadu waxay gebi ahaanba dabka qabsadaa, shakhsiyaadka shakhsiyaadka ah ee maareynta iyo kontroolka, calanka jilicsan ee leh jihada iyo xawaaraha dabaysha, helitaanka dukumiintiga, iyo Maaraynta Sail Management si ay u xakameyso hawlaha markabka. Ship ayaa ka jawaabeysa xawaaraha dabaysha iyo jihada ay la socdaan yawaan, kalluumeysiga, iyo garbaha iyadoo ku xiran hadhuudhada la geeyey iyo dayrka garabka. Dhawaaqyada dhexdhexaadka ah, dabaylaha iyo dabeylaha isbeddelka ah, marinka markabka, "Salute", qiyaasta miisaanka / dhiciddii oo dhan oo ku daraya dhererka.
MUHIIM AH: Akhri dukumeentiyada "HMS Bounty Replica.pdf" oo ku yaala Waraaqaha ee "Windows" si loo barto sida loo xakameeyo doonnida.
Fiiro gaar ah: Dejinta xaqiiqda waa in loo dejiyaa "Hard" oo loogu talagalay Saamaynta Dabaysha ugu Wanaagsan (kama shaqeyn doonto "Fududa" dhabta ah ee gudaha FSX.)
HMS fadligiisa, sidoo kale loo yaqaan Markabka HM Qalabka fadligiisa, wuxuu ahaa markab ganacsi oo yar yar ku iibsaday by Navy Royal ee howlgalka ka botanical. Markabka, oo hoos amarka William Bligh, oo waxaa loo diray in Badweynta Pacific si ay u bartaan dhirta breadfruit oo u qaadista hanti British in xiray Galbeedka. mission Taasi waxaa marnaba ma aysan dhameystirin, ay sabab u tahay kacdoon ah oo uu hoggaaminayo Ku-simaha Taliyaha Fletcher Christian. Tani waxa ay ahayd Kacdoonka caanka ah ee fadligiisa ah.
Author: Milton Shupe, Nigel Richards, Rob Barendregt, Sasha Rieger, iyo Rob Ibey
Koontaroolka Tower FSX & P3D
HMS Borant Reflica FSX & P3D 2.0
Zeppelin NT v1.0 hooyo FSX & P3D
Milkiiyaasha Falcon FSX & P3D